May 2009 edited December 2010 in Other
JScript ကိုမြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လိုချင်ပါတယ် .. share မယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ရောင်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ် ...
ကို willy ရေ..
မြန်မာလို အခြေခံလေး အရင် ဖတ်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တော့ ပိုပြီးတော့ နားလည်လွယ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမယ့် မြန်မာလို စာအုပ်ထွက်မှ ဆိုရင် နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ကျတော်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ နားမလည်းတိုင်း Dictionary လှန်ပြီးတော့ ဖတ်တာဘဲ။ လှန်ရလွန်းလို့ စာအုပ်တော့ ပြဲတော့မယ် ။ မြန်မာလိုထက် ကောင်းတဲ့ Website လေး ကို ကော မဖတ်ချင်ဘူးလား ကို willy ရေး။အရမ်းကောင်းပြီးတော့ အခြေခံကနေ စပြီးရှင်းပြထားတယ်လေး။အဲဒါလေးကို ၀င်ဖတ်လိုက်ပါလား။တကယ့်ကို မြန်မာလိုထက် ကောင်းပါတယ် ကို willy ။
http://www.w3schools.com/js/default.asp ဒီဆိုက်လေးက အရမ်းကောင်းလွန်းပါတယ်။
သိနှင့်ပြီးသာဆိုရင်တော့ Sorry ပါခင်ဗျာ။
သိနှင့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ Sorry ပါခင်ဗျာ။
hey dude .. thz for ur Advice .. but .. it is not for me .. some of my friz request me( they wanna read JScript in Myanmar (ESP: SandaAung ) . so ..... I request this book ...yeah .. i'm not good in Eng: .. but i think i can . :77:
okie dude .. thz ur post././.:65: